एनसीसी बैंकको नाफा २७ प्रतिशत बढ्यो, सञ्चालन नाफा मात्रै १ करोड २५ लाख – Online Khabar
१. इन्टरपोलको रेड नोटिसमा १३ नेपाली (सूचीसहित)
२. पूनम पाण्डेको अर्को हर्कत
३. तेजाब आक्रमणबाट घाइते सम्झना दासको मृत्यु
४. लीलामणि पोखरेलः गुमनाम भएँ, तर बदनाम भइनँ !
५. काम गर्न नसके जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्छन् : प्रचण्ड
६. ‘हामी गरीबको कोही रहेनछ’
७. इमरान खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकोमा पछुतो छैन : रेहम
८. पश्चिम सेती बन्न नदिने को हो ? यस्तो छ भारतीय स्वार्थ
९. ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा ‘फिरङ्गी’ आमिर
१०. के चलचित्रले बम्पर ओपनिङ गर्दा एक दिने कलेक्शन डेढ करोडसम्म हुन्छ ?
११. जागिर पाउनुभएन ? स्थानीय तहमा निवेदन दिनोस् !
१२. नुरप्रसाद अधिकारी पक्राउ, ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थालियो
होमपेज / विजनेश / बिजनेस समाचार
एनसीसी बैंकको नाफा २७ प्रतिशत बढ्यो, सञ्चालन नाफा मात्रै १ करोड २५ लाख
२०७४ कार्तिक २८ गते ११:१२ मा प्रकाशित
२८ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमाशमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको नाफा २७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको नाफा १६ करोड पुगेको छ । गत आवको बैंकले पहिलो त्रैमाशमा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
बैंकको सञ्चालन नाफा भने लगभग ९२ प्रतिशतले घटेको छ । यो रकम १ करोड २५ लाख रहेको छ । २३ करोड रुपैयाँ राइट ब्याक गरेपछि बैंक नाफा बढाउन सफल भएको हो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि १२ प्रतिशतले घटेको छ । यो रकम २१ करोडमा सिमित रहेको छ । त्यस्तै, फि कमिसन, अन्य आम्दानी शीर्षकबाट करिब १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यो रकम ३२ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकले सम्भावित नोक्सान वापतको व्यवस्थामा ३३ करोड रुपैयाँ राखेको छ भने ३१ करोड फिर्ता ल्याएको छ । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ४.६९ प्रतिशत रहको छ । करिब ९३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेको उल्लेख छ ।
बैंकको निक्षेप शतप्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब पुगेको छ । कर्जा करिब ९३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४८ अर्ब पुगेको छ । बैंकको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको अनुपात ७९ प्रतिशत देखिन्छ । तर प्राथमिक पूँजी सहितको निक्षेपको आधारमा भने कर्जाको अनुपात ७०.८३ प्रतिशत रहेको बैंकको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । बैंकसँग थप कर्जा लगानी विस्तार गर्न पर्याप्त रकम रहेको देखिन्छ ।
बैंकको कुल कर्जा लगानीमा ४७ प्रतिशत लगानी रियल इस्टेट, सेयर कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जा रहेको छ । यी क्षेत्रमा २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
बैंकको सेयरमा प्रतिफल करिब १३ प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशत भएको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब धेरैले बढेपछि सेयरमा प्रतिफल घटेको हो । बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने सञ्चिती २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १४.०७ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २७.२२ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ५८ रुपैयाँ रहेको छ ।
तेजाब आक्रमणबाट घाइते सम्झना दासको मृत्यु
लीलामणि पोखरेलः गुमनाम भएँ, तर बदनाम भइनँ !
‘हामी गरीबको कोही रहेनछ’
पश्चिम सेती बन्न नदिने को हो ? यस्तो छ भारतीय स्वार्थ
‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा ‘फिरङ्गी’ आमिर
के चलचित्रले बम्पर ओपनिङ गर्दा एक दिने कलेक्शन डेढ करोडसम्म हुन्छ ?
जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा जान मन्त्रीको स्वीकृति अनिवार्य
महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद
विदेशबाट फर्किएकालाई सस्तो ब्याजमा १० लाखसम्म ऋण, सर्टिफिकेट धितोमा ७ लाख